စိတ်ကူးပုံရိပ်: ပုံရိပ်နှင့်ဘလောက် ငရဲ
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 00:09
ဘလောက်ငရဲလား ဘလောက်နတ်ပြည်အကြောင်းလည်း ရေးဦးနော်။ ;P
ဒီတခါ လူမိုက်တော့ ကြောက်သွားပီလို့ထင်ချင်စရာပဲ...
16 November 2008 at 08:36
ဟား၂ ... စိတ်ကူးလေးက ကောင်းပ ။
မပန်ပြောသလို ဘလောက်နတ်ပြည်အကြောင်း နောက်တခါရေးရန် ရာဇသံပေးလိုက်သည် ။
16 November 2008 at 10:03
ဒီပို့စ်လင့် ကို ဘလော့မှန်မှန်မရေးသူတွေဆီ ပို့ဦးမှပဲ..
ဟီးးး ..... ဘလောက်ငရဲတဲ့...
ဝေလေးလဲ ဘလော့ကိုပစ်ထားတာကြာပြီ.... :P :P
ဖြစ်သေးပါဘူး... ပို့စ်တင်အုံးမှ.... ဟဲဟဲ
ပုံရိပ်ရေ ... ဒါဖတ်ပြီးမှ လန့်တောင်သွားပြီ။ ဂျမ်းဆို ဒယ်အိုးထဲက တက်ရပါ့မလားနော်။ :)
အင်း အဲလိုလေးလည်း ကြောက်ဦးမှပဲနော်... အဟဲ...
မယမင်း... အဲ ယမမင်းကြီးက သဘောကောင်းလို့နော်... မဟုတ်ရင် ပုံရိပ်တို့ တစ်ရက် ပို့စ်အသစ်ဆယ်ခု ရေးနေရမယ်...
ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့ ... :)
မပန်နဲ့ မဂျစ်... ဘလောက် နတ်ပြည်အကြောင်း ရေးဖို့ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ဟဲ..။ ရာဇသံတော့ မပေးပါနဲ့။ ကြောက်လို့။
ကိုနတ်ဆိုး ဟဲဟဲ ထင်ချင်စရာပဲ နော်...။
sin dan lar ဖြန့်လိုက်တယ် ထင်တယ်။ လာဖတ်တဲ့ လူတွေများလာတယ်။ ကြော်ငြာပေးတာ ကျေးဇူး။
မဝေလေး အသိတရားတွေ ရနေပြီ :D။
မဂျမ်းရယ် ပြောပုံကို သဘောကျပြီး ရယ်မိပါတယ်။ ကြံကြံဖန်ဖန်။
ကိုပီတိ ဆယ်ပုဒ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ :)
အတွေးကို အရေးက လိုက်နိုင်တော့
ဘလော့ဂ် ငရဲမှာ တွေ့ ခဲ့ တဲ့သူလေ...
သူက အရင်ဘ၀က မိန်းကလေး ဘလော့ဂါ...
ပို့ စ် အသစ်တွေ မတင်လို့ဘလော့ဂ် ငရဲမှာ ခံနေရတာ..
အရင်ဘ၀က သူ့ နာမည်က “ မ ယမင်း”..။
ဘလော့ခ်ငရဲမှာ ကိုးနတ်ရှင် ကောင်းဖို့ ဂါထာတွေ မတောင်းခဲ့ဖူးလားဗျာ....!
ပုံရိပ်ရေ… ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးလေးနဲ့ပိုင်နိုင်နဲ့ အရေးလေးနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့…
ကြောက်သွားတယ်… ကိုယ်လဲ ခုတလောတကယ် အဲလိုဖြစ်နေတာလေ… မဖြစ်ဖူး မှန်မှန်ရေးမှနော်….
ခုတလော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတာ လက်စသတ်တော့ လေးမ ဒယ်အိုးထဲရောက်နေတာ ဖြစ်ရမယ်...။ ပူပါတယ်လို့အောင့်မေ့တာ..။
မပုံရိပ်က ယမမင်းနဲ့တွေ့ တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတာ...။ လေးမတော့ ဒယ်အိုးထဲရောက်သွားပြီထင်တယ်...။
24 November 2008 at 18:08
ကိုဆူး.. မယမင်းက ဘယ်သူများ ဖြစ်မလဲ မသိ...။
ကိုဒူကဘာ ဂါထာက ဥုံ မြက်မြက်ဆန် မြက်မြက်ဆန်...။
်မတန်ခူးရေ ပုံရိပ်လဲ ရေးပြီးတော့ ကိုယ်ကိုတိုင် မတင်ဖြစ်ပြန်ဘူး ဟီး။
မလေးမရယ် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ.. ပုံရိပ်လဲ ဒယ်အိုးထဲ ရောက်ချင်ပြီ ထင်တယ်။
26 November 2008 at 08:32
ဘလော့ခ်ငရဲ assignment က မလွယ်ပါလား ပုံရိပ်ရေ။ connection မကောင်းပါဘူးဆိုမှ ခိုင်းလိုက်တာ..ရွှတ်..ရွှတ်။
မအလင်းညီ ဟုတ်ပ။ အိပ်မက်မို့လို့ တော်တော့တယ်...။